Igwefoto Igwe Na-eyighị Ahụ enweghị ike idozi Ọnọdụ niile - OMG Solutions
Igwe anaghị achọ ka ọ dozie ọnọdụ niile
Nkwenye na ihe nkiri ahụ a na-ahụ anya ga-egosi ihe mere na ihe dị mkpa gụnyere ndị uwe ojii na ndị nkịtị, n'ụzọ dị otu a ga-ekenye ndị ọrụ ikike izu ike, ndị uwe ojii, nnọkọ nnwere onwe ndị a na-eme ọnụ na imirikiti ọnụ ọgụgụ mmadụ. Ihe a tụrụ anya bụ na iji igwefoto ahụ mee ihe ga - enyere aka ịkọwa ihe ndekọ na - enweghị atụ n'etiti ndị uwe ojii na ndị obodo banyere ihe mere n'oge ọnwụ ma ọ bụ na - egbu egbu. Atụmanya ahụ akpasuola ndị agbata obi na gọọmentị ọkụ site na nnukwu ọtụtụ dollar na-ekwe nkwa ahụ ozu n'ofe nhọrọ nke bọọdụ.
N'ụzọ bụ isi, ndị mmadụ tụkwasịrị obi n'ihe ha hụrụ. Ya mere, vidiyo na-eche na o kwesịrị ịbụ ndozi nke ga-ebelata ọnụ ọgụgụ mkpakọrịta n'etiti ndị uwe ojii na ndị bi na-ebute ike kachasị elu.
Bụrụ na ọ nwere ike, nchọpụta ọgụgụ isi na-atụ aro na enwere ọnụọgụ atọ kpatara ihe nkiri kamera agaghị enye ihe ndị mmadụ chọrọ ịtụ anya.
Igwe - na adịghị ike mmadụ:
Nke mbu bu ihe mgbochi nke ihe ohuru: ihe nlere anya nke igwe n’enye n’enye ihe nlere. Ihe ndi mmadu nwere ike ihu bu ihe ndi ozo, n'ihi onu ogugu nke igwefoto n'ile anya nke onye uwe ojii. Ihe dị iche iche na-agbasa site na isi igwefoto na mgbochi ndị ọzọ. N'ụzọ dị ịrịba ama, ndị mmadụ na-ahụ omume ọma ndị a na-enyo enyo bụ́ ndị kwekọrọ n'ihe ha kwenyesiri ike na ọchịchọ ha, ihe ịtụnanya malitere 'ịhụ ihe na-adịghị irè.'
Etinyere ihe nkiri ndị uwe ojii, nke a na-egosi ọnọdụ ndị mmadụ n'otu n'otu n'ebe mmetụta ndị uwe ojii dị n'ihe ha hụrụ.
Iji maa atụ, mgbe ndị mmadụ lere vidiyo nke onye ọrụ na-akwado onye ala ya, ndị a gwara ka ha lekwasị anya na onye ọrụ gọọmentị na ndị metụtara ndị uwe ojii - ya bụ, ha na-atụgharị uche n'ụzọ zuru ezu na ha nwere àgwà yiri nke ndị uwe ojii ma ọ bụ na-emekọ ntọala - hụrụ ọrụ onye ọrụ ahụ dị ka obere ihe ọ pụtara.
Ndị a n'otu n'otu ga-agwakọta ịdọ aka ná ntị na-enye ikike maka onye ọrụ gọọmentị dị iche na ndị lekwasịrị anya na ndị isi ma ha emetụtaghị ndị uwe ojii.
N'akụkụ ndị a, ma ọ bụrụ na ikwere na cops ma nwee ntụkwasị obi na ị nwe ọria ha, ị ga-ewere ya dịka nchekwa agbachitere.
Nke abuo, eziokwu na onye ọrụ gọọmentị adịghị akọwapụta na kamera ahụ pụtara na ndị mmadụ ga-etinye uche na omume na omume ndị na-abụghị ndị agha. Nke ahụ nwere ike ịnwe nsonazụ dị egwu.
Dịka ọmụmaatụ, na nyocha ndị uwe ojii, mgbe igwefoto na-ejikọtara naanị onye a na-enyo enyo, ndị mmadụ n'otu n'otu ga-akwụghachi ọrụ onye ọrụ nyocha ahụ ebe ahụ. Ọzọkwa, mgbe ha nwere ike ịhụ onye nyocha ahụ, ha na-atụle etu usoro aghụghọ nyocha ga-esi bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-amanye, na n'ozuzu, na-echebara onye na-enyo enyo echiche.
Nke a na-egosi echiche nke igwefoto n'ezie na-egbu data ndị dị n'etiti ha.
N'otu aka ahụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ozu na-etiti ndị ọrụ na-abụghị ndị agha, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ileghara data dị mkpa gbasara ọrụ onye ọrụ ahụ anya na ahụmịhe. N'ezie, ụfọdụ ihe akaebe na-atụ aro na akụkọ onye nyocha banyere ahụmịhe ndị uwe ojii nwere ike ịkọwapụta nkọwa a na-atụghị anya ya ma e jiri ya tụnyere kamera ahụ, na-akpali mkpebi dịgasị iche iche banyere ihe ndekọ ahụ pụtara.
Nke ato, uche ndị mmadụ n’otu n’otu n’ebe ndị uwe ojii nọ anaghị emetụta etu ha si atụgharị omume ndị uwe ojii na fim. Omume ndị a na-emetụtakwa ihe ha hụrụ na vidiyo kamera ahụ.
Anyị chọpụtara na ndị metụtara ndị uwe ojii (ọzọkwa, ndị chere na ndị uwe ojii dị ka ha) ga-adabere na akụkọ onye ọrụ gọọmentị iji ghọta ihe ha hụrụ na ịse foto ahụ.
N'ihe doro anya karị, ha kpughere na ndị ọrụ na-abụghị ndị agha na vidiyo ahụ na-etinye agụba - agbanyeghị, enweghị agụba na vidiyo ahụ - n'ihi eziokwu ahụ onye ọrụ gọọmentị kwuru na ya hụrụ agụba. Ndi mmadu huru vidio a na-anwa ighota ihe onye ochichi ji eme ihe site na iji data ha nakweere n'oge na-adighi anya, n'agbanyeghi na o kweghi na ndekọ.
N'ozuzu, akụkọ onye ọrụ gọọmentị jupụtara na isi mmalite data na-ezighi ezi, nke ahụ bụkwa ihe ndị mmadụ hụrụ.
N'ụzọ dị mwute, jụọ ajụjụ banyere aghụghọ aghụghọ, dịka ọmụmaatụ, nke a na-egosi na ha ama ama nke ọma, n'agbanyeghị na a dọrọ ndị mmadụ aka na ntị na data ezighi ezi ma ọ bụ nye nkọwa maka ihe kpatara mmejọ ahụ.
Ihe kpatara o ji dị mkpa:
Ihe mgbanwe ndị a ga-ewetara obere okwu ma ọ bụrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịmata amamịghe ha ma dịkwa mma maka ha.
Bụrụ na o nwere ike ịbụ, ha anaghị eme ya.
Kama, ndị mmadụ kwenyere na ihe ha hụrụ ma na-echeta bụ ngosipụta ụwa zuru oke, n'agbanyeghị ihe ha hụrụ ma chetakwa na ha hiere ụzọ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị mmadụ na-amata na amụma ebumpụta ụwa na ncheta nke ndị ọzọ ga-egbochi ikike ndị ọzọ nwere ịbụ ndị lekwasịrị ndị na-ekiri ihe nkiri ndị uwe ojii.
Kaosinadị, ndị mmadụ n'otu n'otu na-anabata na ha nwere ike ịhapụ ịkọwa onwe ha iche. Ederede uche ya na-atụ aro na nkwenye a hiere ụzọ ma nwee ike imebi ikike ichebara echiche.
Ihe nkiri kamera ahụ dị oke egwu n'ihi na ọ ga-echekwa ndị isi abụọ na ụmụ amaala oge niile na ebubo ụgha. N'ọnọdụ ọ bụla, a ghaghi ịghọta na nchepụta nke uche na ncheta nke ndị mmadụ ga-etolite mgbe ihe akaebe na-ejighị n'aka na ndị mmadụ n'otu n'otu na-akpachapụghị anya na ebumnuche ha.
Yabụ na ihe nkiri egwu ara agaghị abụ nnukwu azịza maka imezi mmekọrịta ndị uwe ojii nwere njikọ. Theha nhatanha ga-agbacha mbọ ike etu esi edozi nsogbu ndị a.
Otu n'ime nchegbu kachasị mkpa nke na-akpali nhọrọ enweghị oke nke ozu bụ iji ndị uwe ojii jiri ike. Na nsonaazụ nke ụzọ 2014 nke Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice na ọtụtụ ndị ọzọ, enwere mgbali iji nwee ike imeri mmadụ niile na bodycams na nkwa nke hara nhatanha. N'oge ahụ mgbe ndị uwe ojii mara oke mma nke St. Louis họọrọ ịghara ịkagbu onye ogbugbu Michael Brown, ndị ezinụlọ ya rịọrọ ka mba ahụ sonye na "agha iji kwado na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-arụ ụzọ nke mba a na-etinye igwefoto ahụ."
Thatbụ na ọ nwere ike, na adịghị ike, ala ọdịdị nke bodycam ịse mgbe nile na-agụnye ihe pundits akpọ a "tricky ike," Nke nwere ike inyere legitimize uwe ojii itinye n'ọrụ nke ike.
Otu n'ime nyocha ndị dị mkpa nke ahụ igwe, na 2014 site n'aka ndị uwe ojii Executive Research Forum, nyere onyinye na-adọrọ adọrọ na "kamera ndị eyiri ahụ na-egbochi nsogbu ịpụta n'ọnọdụ ọ bụla site na ịgbasa usoro gọọmentị na-egbu maramara. ma mee ka ndị ọrụ ọrụ mara ma lebara okwu ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ anya dị n'etiti nkewa anya. ” N'afọ sochirinụ, mgbe Attorney General Loretta Lynch kọrọ $ 23 nde bodycam ibuo usoro ihe omume na-agba ọsọ, ọ weghachiri nkwa nke "ịkwụ ọtọ, ibu ọrụ, na ikwere."
Eziokwu abụrụla ihe gbagwojuru anya.
Nleghara anya nke ngalaba na-enye ọtụtụ ndị isi nlebara anya mgbe na ihe ịdekọ. Soro ya site na insurances nchekwa na-ezighi ezi, nke gbadoro anya n'ịhụ ndị isi karịa ọnụọgụgụ mmadụ niile, na bodycams na-amalite ịdị obere ka akụrụngwa iji debe ndị uwe ojii n'usoro ma jiri nwayọ nwayọ dị ka ngwaọrụ iji nyochaa ndị mmadụ oge niile. Anyị na-eche maka nhụsianya Maazị Timpa na-ata ahụhụ na nkeji oge gara aga naanị n'ihi afọ atọ ziri ezi nke Dallas Morning News mere ka ewepu ndekọ ahụ. Ihe ọzọ bụ na ikpe ahụ abụghị ihe anomaly.
Ngalaba Uweojii na New York leghaara ihe nkiri bodycam anya na pasent 40 nke ọnọdụ ebe ndị otu Civil Review Board na-ekwu maka ya. Agbanyeghị, mgbe ndekọ a dị mma maka ndị uwe ojii, a na-ahapụ ya mgbe niile ma ọ bụ wụsa ya na nzuzo naanị awa. Standardkpụrụ abụọ a nwere ike ịgbagọ nghọta emeghe banyere otu na mgbe ndị uwe ojii na-eji ike.
Ihe mgbanwe ndị a ga-ezu iji mee ka ntụpọ maka ikpo ọkụ maka bodycam, mana mmebi ahụ na-aga n'ihu. Mgbe mgbe, ngwa a na-enye ndị mmadụ n'ozuzu dịka akụrụngwa ịtụle ndị ọrụ gọọmentị nwere ọrụ ga-arara otu netwọlụ ha kwesịrị itinye.
Kamera nke onye ọrụ gị na-enweta data na narị otu narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ mmadụ nke onye ọrụ gọọmentị hụrụ n'ụbọchị enyere. Ihe ndekọ ndị a nwere ike kpughee ọtụtụ ihe gbasara ndị na-akwụwa aka ọtọ site na mmadụ n'ozuzu ha, mana mmetụta nchekwa nwere ike bụrụ nke siri ike mgbe esonyere ya na ọkụ ọkụ na-emepe emepe na ịhazi nchọpụta ihu ihu n'ime igwe ahụ dị ugbu a.
Ejikọtara ya na ihu ya ga-enyere ndị uwe ojii aka gbanwee mgbada ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na onye ya na ya na-aga ebe ahụ na-enweghị enyemaka. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ gọọmentị na-ahapụ mwepụ nke nwa ebu n'afọ ma ọ bụ onye nnọchiteanya ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nwere ike belata akụkụ ụfọdụ nke ikike ichebe anyị kachasị.
Nchegbu banyere echiche na akwụkwọ akụkọ a na-ekwu maka igwe ahụ na-emetụtakwa na ndekọ ndị uwe ojii nyochara. O doro anya na nyocha a gbara ajụjụ ọnụ site n'echiche nke onye a na-enyo enyo na-enwe ihe ịga nke ọma karị na-eme ka ndị na-eche nche kwenye na nkwenye dị iche na nke ndị ọkachamara na-ahụ maka nchọpụta. Ka o sina dị, ọ bụghị ihe niile ịchọrọ ya na uwe ojii ndị uwe ojii, nke jikọtara na uwe ndị isi, enweghị ezigbo ihe kpatara a ga-eji kọọ akụkọ naanị otu echiche nke mkparịta ụka. Agbanyeghị, mgbe ihe ruru steeti iri na abụọ enweghị mkpa ọ bụla ịdekọ nyocha obe, nke na-enweghị nke ọ bụla, ka igwefoto gosi nyocha site n'eleghị mmadụ anya n'ihu.
Patternkpụrụ a doro anya na sayensị nwere ike ịnwale. Chief James O'Neill nke Ngalaba Uwe Ojii New York dere na oge Times na ihu ihu bụ ngwaọrụ iji hụ na ndị zaghachiri: “Ngwaahịa ahụ ekpochapụla ndị a na-enyo enyo. Mgbe ejiri ihu ọhụrụ nabata ya dị ka mmachi amabeghị nke ọma na nyocha - etu mpaghara nka anyị siri jiri ya mee ihe - usoro ọmụmụ ọmụmụ na-ekwekọghị n'okike nke ịha nhatanha na-aka karịa. ” Ma ngosipụta a nke ihu ihu dịtụ ka ihe omume ya ọkachamara.
Ka o sina dị, otu okwu e dere ede, ebubo a e boro ya megide ikpe na-ezighị ezi e kpere mere ka ndị uwe ojii zigaara onye na-ekiri ihe nkiri foto ha ma jụọ, “Onye a ọ̀ bụ onye ahụ?” Kinddị ịjụ ịnya ụgbọ ala bụ ụdị mmetọ a nke nwere ike ịme ka ndị na-ahụ ihe na-egosi ihe na-enweghị isi, na-akwalite ha ka emechaa kọwaa onye ọ bụla n'ụlọ ikpe. Ọzọkwa, ihe ọhụrụ e rere na nkwa nke ibu ọrụ ghọrọ ihe ize ndụ na nchekwa.
Otu n’ime okwu ndị a nwere azịza nke ha. Maka bodycams, nke ahụ na-egosi ọta nchebe ọhụụ na isi ihe na-akpachapụ anya na nlezianya gọọmentị banyere oge ịdekọ. Maka ule nyocha, ọ pụtara ịpịa ha site n’agaghị ele mmadụ anya n’ihu na ogologo oge ị na-ekwu okwu. Kedu ihe ọzọ, maka nkwenye ihu, ọ na-egosi mmachibido iwu ruo mgbe a ga-edozi ajụjụ banyere amụma.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkpachara anya banyere mmezi pụrụ iche maka nsogbu okwu. O doro anya na nhazi ihe nlere nwere ike dikwa egwu karia okwu ha na-anwa idozi.
Nzuzo 6275 2 Echiche Taa